Migraine (1) မိုင်ဂရင်း (၁) - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
၁။ အသက် ၄၄ မ၊ အိမ်ထောင်ရှိ၊ ကလေး ၂ ယောက်ရှိ၊ ရာသီမှန်။ မိုင်ဂရိမ်းရှိပါတယ်။ မျက်ရိုးကအမြဲကိုက်နေလို့ဘာဆေးသောက်ရမလဲ ဘယ်လိုစားသောက် နေထိုင်ရမလဲ။ ညဘက် ၂ နာရီလောက် ထပြီးဆီးသွားပါတယ်။ အရင်က မသွားပါ။ ဖြစ်တာ ၁ လလောက်ရှိပါပြီ အိပ်ခါနီးရေ ကော်ဖီမသောက်ပါ။ ဆီးချိုစစ်တာ မရှိပါ။ ဆေးစာမှာဟော်မုန်း နည်းသွားလို့ ဖတ်ရပါတယ်။ ဘာဆေးသောက်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုစားသောက်နေထိုင်ရမလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာ့စာတွေဖတ်ပြီး တော်တော်နေ ကောင်းလာပါတယ်။
၂။ ဆရာရှင့် ကျွန်မ Migraine ရောဂါနဲ့ပါတ်သက်ပြီး သိချင်ပါတယ်ရှင့်။ ကျွန်မရဲ့သူငယ်ချင်း အသက် ၃၆ နှစ်မှာ နာတာရှည် ခေါင်းကိုက်ရောဂါစွဲကပ်နေတာ ၁၀နှစ်ကျော်လောက်ရှိပါပြီရှင့်။ တလမှာတခါ နှစ်ခါ၊ တခါတရံ ၃ ကြိမ်။ ရာသီဥတုပူရင် ဖြစ်ဖြစ် အေးရင်ဖြစ်ဖြစ် ပင်ပန်းလာရင်ဖြစ်ဖြစ် ခေါင်းတွေတဆစ်ဆစ်မခံမရပ်နိုင်လောက်အောင် ကိုက်ခဲပြီး တော်တော်ကြာ အိပ်စက်လိုက်ရင်၊ Panadol သောက်လုက်ရင် သက်သာသွားပါတယ်။ CT scan ရိုက်ကြည့်တော့လည်း ဘာရောဂါ ဘာအကျိတ်မှ မတွေ့ရပါဘူးရှင့်။ ဒီလိုအကိုက် အခဲပျောက်ဆေးတွေကို ရေရှည်ဆွဲသောက်နေတာသင့်မသင့် နဲ့ ဘယ်လို follow up လုပ်ရမယ်ဆိုတာ အကြံဥာဏ်လေး တောင်းခံပါရစေရှင့်။့့ မှာ အလုပ်လုပ်နေတာကြောင့် ဘယ်ဆရာဝန် ဘယ်ဆေးခန်းဆက်ပြရမလဲ ဆိုတာလည်း အခက်အခဲရှိတာကြောင့် ဆရာထံ အကူအညီ တောင်းခံအပ်ပါတယ်ရှင့်
ကမ္ဘာမှာ လူ ၁၁%မှာ မိုင်ဂရင်းရောဂါရှိမယ်။ Olfactory hallucinations အနံ့တကယ်မရဘဲ စဉ်းစားလို့ ရောဂါထလာတာ ရှားတော့ ရှားပါတယ်။ ဒီအချက်ကို ဘာလို့ဆိုတာ ဆရာဝန်တွေက နားမလည်ကြသေးဘူး။ မိုင်ဂရင်း ခေါင်းကိုက်ပုံက အထဲမှာ သွေးကြောခုန်သလိုဖြစ်တယ်။ ကွက်ပြီး ထိုးကိုက်တယ်။ နာတာကလဲ တမျိုး၊ တဖက်တည်းနာမယ်။ ပျို့-အန်ချင်မယ်။ အလင်းရောင်ကို မကြည့်နိုင်ဘူး။ တချို့ကြ နှစ်ဘက်လုံးကိုက်တယ်။ ထိုးကိုက်သလို မဟုတ်ဘဲ ထုံသလိုကိုက်တယ်။ တချို့မှာ အစားပျက်မယ်။ အသိဥာဏ်ဆိုင်ရာ အားနည်းမယ်။ ဆူတဲ့အသံ မကြားချင်ဘူး။ တချို့အနံ့ကို မကြိုက်တာဖြစ်မယ်။ မျက်စိကြည့်ရတာမကောင်း ဖြစ်မယ်။
အာရုံကြောနဲ့ သွေးကြော အလုပ်မမှန်တာပါ။ သွေးကြောနားက ပါရာဆင်ပသက်တစ် အာရုံကြောကနေ ထုတ်ပေးတဲ့ Neuropeptides ကြောင့် သွေးကြောတွေကျယ်ပြီး မိုင်ဂရင်းခံစားရတယ်။ Trigeminal nucleus caudalis, Nucleus tractus solitarius နဲ့ Dorsal raphe nucleus အာရုံကြောဆိုင်ရာတွေ အလုပ်မမှန်တာကြောင့်လို့ ယူဆရတယ်။ ဦးနှောက်အညှာနေရာမှာရှိတဲ့ Sensory modulation နေရာမှာ အမှားတွေ့ရလို့ နာတာကိုသိတဲ့စနစ် ချို့ယွင်းတာလို့ သိရတယ်။ ရောဂါခံစားရခါနီးမှာ ဒါမှမဟုတ် ခံစားရချိန်မှာ ဦးနှောက်နေရာကို သွေးလိုသလောက် မရောက်တော့ဘူး။ တနာရီ ဒါမှမဟုတ် နောက်ပိုင်းမှာတော့ သွေးပိုလျှောက်လာပြန်တယ်။
ကိုယ်မကြိုက်တဲ့ အနံ့တခုခု ဥပမာ ညှော်နံ့၊ ပုပ်နံ့ စတာမျိုးကို စိတ်ထဲမှာ တွေးလိုက်တာနဲ့ မိုင်ဂရင်း ဖြစ်လာစေမဲ့ ပဏာမပျိုးအဆင့် Aura ကို ရစေနိုင်တယ်။ မိုင်ဂရင်း ဖြစ်သူတွေထဲက ၃ဝ% ဟာ အနံ့အသက် အပါအဝင် အာရုံခံမှုနဲ့ ဆက်စပ်တယ်။ အမြင်ကြောင့် ဥပမာ အလင်းရောင်၊ အမဲစက် မျိုးကနေစတာကတော့ ပိုများပါတယ်။ အနံ့ကနေ တချို့မှာ လာဖြစ်ကြတယ်။ အဖြစ်များလှတော့မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမဲ့ သိသာတယ်။ အဲလို တကယ်အနံ့မရဘဲ ရတာမျိုးကို Olfactory hallucinations ခေါ်တယ်။
လူနာပေါင်း ၂၁ဝဝ ရဲ့ မှတ်တမ်းတွေကိုလည်း စစ်ဆေးတော့ အများစုက မီးလောင်တဲ့အနံ့၊ မီးခိုးနဲ့ကို မကြိုက်ကြပါ။ တချို့က ဘယ်မီးခိုးနံ့ဖြစ်ဖြစ်၊ တချို့က တိတိကျကျ ဥပမာ ဆေးလိပ်မီးခိုးနံ့၊ သစ်သားမီးလောင်တဲ့အနံ့၊ ပြောင်းဖူး (ပေါ့ပ်ကွန်) ညှော်နဲ့ တွေကို မကြိုက်ကြဘူး။ အမှိုက်နဲ့၊ ပုပ်သိုးနံ့၊ မိလ္လာနံ့တွေကို ဒုတိယတန်း မကြိုက်ကြပါ။ လူနည်းနည်းက ကောင်းတဲ့အနံ့ ဥပမာ လိမ္မော်နံ့၊ ကော်ဖီ၊ ဘဲသည်းကို မကြိုက်တာလဲ တွေ့သိရတယ်။
ရောဂါထချိန်မှာ နားပါ၊ ဆိတ်ငြိမ်ရာ၊ အလင်းရောင်နည်းရာမှာ နေပါ။
• Aspirin, Acetaminophen, Ibuprofen, Naproxen တခုခုသောက်ပါ။ တလမှာ ဒီဆေးတွေကို ၁၅ ရက် ထက်တော့ ပိုမသောက်ပါနဲ့။ ဆေးတမျိုးမကတွဲသောက်တာဆိုရင် ၁ဝ ရက်ထက်မပိုပါနဲ့။
• Cafergot (Ergotamine tartrate 1 mg + Caffeine 100 mg) ဆေးကလဲ သက်သာစေတယ်။ ခေါင်းကိုက်တာနဲ့ ၁ ပြား ၂ ပြား သောက်နိုင်တယ်။ နောက်ပိုင်း မိနစ် ၃ဝ တခါ ၁ ပြား သောက်နိုင်တယ်။ တချီမှာ ၆ ပြားအထိ သောက်နိုင်တယ်။ ဆေးကိုစုပ်ယူတာနှေးလို့ရော၊ အန်တာကြောင့်ပါ တခါတလေ ထိရောက်မှု နည်းတတ်တယ်။
• Cafergot ဆေးကို Suppositories (Ergotamine2mg) စအိုကနေလဲ ပေးနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် Dihydroergotamine mesylate 0.5–1 mg ကို သွေးကြောထဲဖြစ်ဖြစ် 1–2 mg ကို အသားဆေးဖြစ်ဖြစ် နဲ့ အရေပြားအောက်ဖြစ်ဖြစ် ထိုးပေးနိုင်တယ်။
• Prochlorperazine 25 mg suppository စအိုထဲ ဒါမှမဟုတ် 10 mg သွေးကြောထဲထိုးရတယ်။
• Ergotamine ပါတဲ့ဆေးတွေကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် မပေးရပါ။
• Sumatriptan ဆေးက သက်ရောက်မှုရတာ မြန်တယ်။ အရေပြားအောက်မှာ ထိုးတယ်။ ကိုယ်ဖါသာလဲ ထိုးဘို့ လုပ်ထားတာမျိုးရှိတယ်။ နှာခေါင်းကနေဆေးပေးတာမျိုးလဲလာတယ်။ စားဆေးလဲ လာတယ်။
• Zolmitriptan စားဆေးကလဲ ဒီဆေးနဲ့ဆင်ဆင်ဘဲ။5mg သောက်တာ ၁ နာရီနေရင် သက်သာမယ်။ နှာခေါင်းကနေပေးတာမျိုးလဲ လာတယ်။
• Eletriptan 80 mg ဆေးကို ရုတ်တရက်ဖြစ်တာအတွက်သုံးပြီး၊ Frovatriptan 7.5 mg ဆေးကို ရေရှည်အတွက် ပေးတယ်။
• Triptans ဆေးက အန်ချင်တတ်တယ်။ အမျိုးသမီး၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေ မပေးတာကောင်းတယ်။ နှလုံးရောဂါ၊ အဝလွန်သူ၊ ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေကိုလဲ မပေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ Naproxen 500 mg နဲ့တွဲပေးရင် ထိရောက်တယ်။
• Neuroleptic droperidol ကလဲ ရုတ်တရက်ဖြစ်တာအတွက်ကောင်းတယ်။
• Metoclopramide ဆေးကို အကြောဆေးထိုးပေးနိုင်တယ်။
• Opioid analgesics ဘိန်းပါတဲ့ အနာသက်သာဆေးကို တချို့အတွက်သုံးရတယ်။ Meperidine 100 mg အသားဆေး၊ Butorphanol tartrate 1 mg/spray နှာခေါင်းထဲပန်းဆေး၊ Propofol အကြောဆေး၊
• Zomig (zolmitriptan) 2.5mg tablets ဆေးကထိရောက်ပါတယ်။ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှုများ = အာခေါင်ခြောက်။ ခေါင်းမူး။ နွေးသလိုခံစား။ ခေါင်းကိုက်။ အလင်း-အသံတွေကို ခါတိုင်းထက်သိလွယ်။ ကြွက်သားနာ။ ပျို့။ ရင်တုန်။ လေးလံနေသလိုခံစား။ အိပ်ရေးခက်။ မျိုချရခက်။ အန်။ အားနည်။ သိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရောဂါဖြစ်ရင် ဆေးသောက်ပါ။
• Amitriptyline 10–150 mg ဆေး၊ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု = အိပ်ချင်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ဝမ်းချုပ်၊ အလေးချိန်တက်၊ မျက်စိကြည့်မကောင်း၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးဖိအားတက်၊ ဆီးသွားရခက်၊
• Botulinum toxin type A ထိုးဆေးကို ဦးရေခွံမှာထိုးပေးတာလဲလုပ်တယ်။
• Clonidine 0.2–0.6 mg ဆေး၊ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု = အိပ်ချင်၊ ခေါင်းကိုက်၊ ဝမ်းချုပ်၊
• Cyproheptadine 12–20 mg ဆေး၊ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု = အိပ်ချင်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ဗိုက်အောင့်၊ ဝမ်းမမှန်၊
• Fluoxetine 20–60 mg ဆေး၊ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု = စိုးရိမ်စိတ်၊ အိပ်မရ၊ ချွေးထွက်များ၊ လက်တုံ၊ ဝမ်းမမှန်၊
• Imipramine 10–150 mg ဆေး၊ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု = အိပ်ချင်၊ အာခေါင်ခြောက်၊ ဝမ်းချုပ်၊ ကိုယ်အလေးချိန်တက်၊ မျက်စိကြည့်မကောင်း၊ ကိုယ်ရောင်၊ သွေးဖိအားတက်၊ ဆီးသွားရခက်၊
• Propranolol 80–240 mg ဆေး၊ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု = အားယုတ်၊ စိတ်ကျ၊ အိပ်မရ၊ ပျို့-အန်ချင်၊ ဝမ်းချုပ်။
• Sertraline 50–200 mg ဆေး၊ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု = စိုးရိမ်စိတ်၊ အိပ်မရ၊ ချွေးထွက်များ၊ လက်တုံ၊ ဝမ်းမမှန်၊
• Timolol, Metoprolol, Nimodipine, Nicardipine, Diltiazem ဆေးတွေလဲသုံးနိုင်တယ်။
• Verapamil 80–160 mg ဆေး၊ ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု = ခေါင်းကိုက်၊ သွေးဖိအားကျ၊ ကိုယ်ရောင်၊ မျက်နှာနီမြန်း၊ ဝမ်းချုပ်၊
• အတက်ကျဆေးတွေဖြစ်တဲ့ valproic acid (500–1500 mg), Gabapentin (900–2400 mg) နဲ့ Topiramate (50–200 mg) တွေကိုလဲသုံးတယ်။ Valproic acid ကို ကိုယ်ဝန်တွေမှာ မသုံးပါ။
အရေးပေါ်ဆေးများ (အန်တာကို သက်သာစေသည်။ အိပ်ချင်မည်။)
1. Ergotamine (နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် သွေးတိုးရှိသူများမှအပ) ရှူဆေး၊ စအိုမှလည်းပေးသည်။
2. Chlorpromazine 0.1 mg/Kg IV သွေးကြော-ထိုးဆေး၊ (အန်တာအတွက်လည်းကောင်း)
3. Prochlorperazine 10 mg IV သွေးကြော-ထိုးဆေး၊ (အန်တာအတွက်လည်းကောင်း)
4. Metoclopramide 10-20 mg IV သွေးကြော-ထိုးဆေး၊ (အန်တာအတွက်လည်းကောင်း)
5. Dihydroergotamine (DHE) 0.75 to 1 mg Slow IV (နှလုံး သွေးကြောကျဉ်းရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် သွေးတိုးရှိသူများမှအပ) သွေးကြော-ထိုးဆေး၊
6. Sumatriptan6mg S/C (နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် သွေးတိုးရှိသူများမှအပ) အရေပြားအောက်-ထိုးဆေး၊
7. Ketorolac 60 mg IM အသားထဲထိုးဆေး၊